” ရှူခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်း “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Think Different » ” ရှူခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်း “	7
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Oct 17, 2016 in Think Different |7comments
သျှားသက်မာန် says: – မင်န်ဘာတဦးသည် တရက်လျှင်ပို့စ် ၂ခုထက်ပိုမတင်ရ ……….စည်းကမ်းချက်ပါ………….
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: စိတ်နှငိရာ 18-10-2016 7:01
ပြန်ချိန် 17-10-2016 20:48
ရှင်ခြင်း 17-10-2016 20:41
မှား 14-10-2016 3:00
ပြီးတဲ့အခါမှ 12-10-2016 17:55
စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခြင်း မရှိပါ ။
ကထူးဆန်း says: သူကြီး ရဲ့ ခောတ် နဲ့ မလျော် ညီတော့ တဲ့ ဥပဒေ တစ်ခု …. နှစ်ပုဒ်ထက် ပိုတင် ရင် ပွို င့် ပိုပေးမယ် ပြောင်း ရတော့ မှာ ….
Thint Aye Yeik says: အသက်ရှူပုံချင်းတော့ ကွဲသေးတယ် ဆိုလား
သျှားသက်မာန် says: အော်ကြည့်လိုက်ရင်တော့…တစ်နေ့ ထဲလိုလိုဖြစ်နေလို့ပါ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဖြစ်တတ်ပါတယ်
Foolish Girl says: တခါတခါ